မိန်းမကိုယ်မှာ ပေါက်တဲ့ဝက်ခြံ - Hello Sayarwon
ဝက်ခြံ မျက်နှာမှာ ပေါက်ရင် သြော်……..ပေါက်နေကျပဲလေလို့ ထားလိုက်တတ်ပေမယ့် မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံ ပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ ပေါက်လေ့ပေါက်ထရှိရဲ့လား။ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တစ်ခုခုများရှိနေတာလားဆိုပြီး စိုးရိမ်တဲ့စိတ် လေဒီလေး တော်တော်များများ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်မှာ ပေါက်တဲ့ဝက်ခြံက ပုံမှန်ပဲလားလို့ သိချင်နေတယ်ဟုတ်………..
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်တာက ပုံမှန်ပဲလား၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်တာ ပုံမှန်ပဲလား………..
မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်တာက တကယ့်ကို ပုံမှန် အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှာ ချွေးပေါက်ဂလင်းလေးတွေနဲ့ မွေးညှင်းအိတ်လေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဝက်ခြံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဝက်ခြံ ဖြစ်သလို မျိုးပေါ့။
နောက်တစ်ချက် ရှိတာက မိန်းမကိုယ်ဟာ နုနယ်သလို ခန္ဓာကိုယ်က အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အရေပြား အမျိုးအစားပါ။ ဒါကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာလည်း ဝက်ခြံ၊ အဆီဂလင်းပိတ်ဆို့မှုကနေဖြစ်လာတဲ့ ဆားဝက်ခြံလို အဆံတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်လာတဲ့အခါ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ နေရထိုင်ရ မသက်မသာဖြစ်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်မှာ ဘာကြောင့် ဝက်ခြံ ဖြစ်ရတာလဲ………….
မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ အများကြီးပါ။
အမွှေးနံ့ပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ ထိတွေ့မိတာ
feminine wipes သုံးတာ
အတွင်းခံကို လျှော်တဲ့အခါ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ အလွန်အကျွံသုံးတာ
မီးပူတိုက်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ အမွှေးဆီတွေကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံ ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
သုက်ပိုးတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မိန်းမကိုယ်မှာ ဝက်ခြံ ထွက်နိုင်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်မှာ ပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်
အဝတ်တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် မဝတ်ပါနဲ့။
ဝက်ခြံတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် ခဏခဏ မကိုင်ပါနဲ့။
အနံ့ပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ မတိုက်ပါနဲ့။
လစဉ်သုံးတွေကို အမွှေးနံ့မပါတာမျိုး သုံးပါ။
Yes, That’s Acne On Your Vagina. Here’s How To Treat It. https://www.prevention.com/health/a20471293/treatment-for-vaginal-acne/ Accessed Date 21 December 2020
An Overview of Vaginal Pimples https://www.verywellhealth.com/vaginal-pimples-overview-4685090 Accessed Date 21 December 2020
Probiotic က မိန်းမကိုယ်မှိုစွဲတာကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်သလား